CR7 & Ramos Oo Laga Reebay Xidigaha Real U Dheeleysa Beri %
CR7 & Ramos Oo Laga Reebay Xidigaha Real U Dheeleysa Beri
Tababaraha Real Madrid ee Zidane ayaa wuxuu soo saaray liiska ciyaartoyda uga qeyb qaadan doonta kulan ciyaareedka uu wajahayo maalinta Berri ah naadiga kubada cagta Las Palmas, kaasoo ka tirsan horyaalka La Liga, ee wadanka Spain.
Ciyaarta labadaan naadi oo laga dheeli doono garoonka caanka ah ee Estadio Gran Canaria, ayaa waxaa lag daawan doonaa saacadda geeska afrika marka ay soo dul istaagto 19:40 oo Fiidnimo – Laacib.so ayaadna natiijada kala socon doontaa.
Palmas ayaa waxay shaxda kala horeynta La Liga ay ka fadhisaa kaalinta 18aad, iyadoona leh 21 dhibcood, waxayna kaliya ka hooseysaa Deportivo iyo Malaga kuwaasoo iyagana kala leh20 oo Deportivo ah iyo 14 Buundo oo Malaga ah.
Zidane ayaa wuxuu kulankaan usoo xushay ciyaaryahano kuwaasoo ah dookha koowaad, isagoona kasoo tegay saddex kamid ah laacibiinta ugu muhiimsan Los Blancos, kuwasooo kala ah: Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos iyo Isco.
Sababta ugu way nee ciyaartoydaan looga saaray liiska ayaa waxay tahay inay kusoo daaleen kulamadii ay udheeleen iscbuuyadii lasoo dhaafay dalalkooda, laakiin waxaa liiska kasoo muuqday Gareh Bale iyo Karim Banzema.
Luka Modric, Marcos Asensio iyo kuwa kale, ayaa sidoo kale kasoo muuqday, waxaana ka arki kartaa liiska ciyaartoyda uu Zidane usoo xushay kulankaan iyagoo dhameystiran halkaan hoose ee ka bogasho wacan saaxiibayaal.
Keylor Navas, Castilla, Luca, Vallejo, Varne, Nacho, Theo, Achraf, Vejero, Modric, Casemiro, Llorente, Asensio, Kovacic, Oscar, Benzema, Bale, Lucas Vasquez iyo Mayoral
CR7Las Palmas vs Real MadridRamos
Muxuu Ku Soo Dhaamaday Kullan Cayaaredkii U Dhaxeeyay Kooxaha Banaadir Sports club Iyo Horseed
Hordhac: Las Palmas vs Real Madrid